» एमालेको १०औं महाधिवेशन: प्यानल बनाए कारबाही, पर्चा–पम्प्लेटमा बन्देज
२१ मंसिर २०७८
एमालेको १०औं महाधिवेशन: प्यानल बनाए कारबाही, पर्चा–पम्प्लेटमा बन्देज
२०७८ मंसिर ९, बिहीबार ०७:१२
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि प्यानल बनाउन रोक लगाइएको छ । विगतका महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर नेतृत्व चयन गर्दै आएको एमालेले १०औं महाधिवेशनमा भने रोक लगाएको हो ।
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा। विजय सुब्बाले प्यानल बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कुनै पनि प्यानल बनेको कागजात सार्वजनिक भएमा नियमअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरेका छौं,’ सुब्बाले भने ।
कुनै पनि उम्मेदवारले प्रचारका लागि पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानरजस्ता कुनै पनि सामग्री वितरण गर्नमा आयोगले बन्देज गरेको छ । उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचयबाहेक अन्य सामग्रीहरू सार्वजनिक गरेमा आयोगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले सर्वसम्मत चयन गर्न नसकेको अवस्था आयोगको तर्फबाट निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी पूरा भएको सुब्बाले बताए । आयोगले बिहीबारदेखि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि चितवनको सौराहामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै छ ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह १० मंसिरमा चितवनको नारायणी नदीको किनारमा हुँदै छ । महाधिवेशनको बन्दसत्र सौराहको सेभेन स्टार होटलमा ११ र १२ मंसिरमा हुँदै छ ।
निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा। सुब्बाका अनुसार ११ मंसिरमा उम्मेदवारी दर्ता र सोही दिन फिर्ता लिने कार्यक्रम रहेको छ ११ मंसिर बेलुकी ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ भने १२ मंसिरमा मतदान सुरु हुनेछ ।
१ सयवटा भोटिङ मेसिनको व्यवस्था
आयोगले १ सय वटा विद्युतीय मतदान मेसिन (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन)बाट मतदान गराउने तयारी पूरा गरेको छ । आयोगले ९२ वटा मेसिनहरू निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ । तीनवटा मेसिन नमुना मतदानका लागि आयोगको कार्यालय अगाडि खुला रूपमा राखिनेछ । ती मेसिनहरू मतदान कसरी गर्ने भन्ने’दयगतमा प्रतिनिधिलाई सिकाउनका लागि राखिनेछ । पाँचवटा मेसिनहरू जगेडामा राखिनेछ । मतदानका क्रममा कुनै मेसिनमा गडबडी आएमा जगेडाका मेसिनहरू प्रयोग गरिने सुब्बाले बताए ।
एक जना प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सरदर आधा घण्टा लाग्ने अनुमान छ । एउटा मेसिनमा करिब २२ जनादेखि ३० जनाले मतदान गर्नेछन् । मतदान सकिएको करिब २ घण्टाभित्र नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ । प्रत्येक मेसिनबाट अलगअलग मतगणना गर्ने भएको हुँदा त्यति समय लाग्ने आयोगको जनाएको छ ।
५० क्षेत्रमा निर्वाचन हुने
एमालेको विधानअनुसार विभिन्न ५० वटा क्लस्टरमा निर्वाचन हुन्छ । १५ जना पदाधिकारीसहित २ सय २५ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा १५ र केन्द्रीय लेखा आयोगमा १५ गरी ३० जना निर्वाचित हुनेछन् ।
प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारको जानकारी
निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मतदान गर्न सहज बनाउन ११ मंसिरमा राति नै मोबाइलमा उम्मेदवारको विवरण उपलब्ध गराउनेछ । १२ मंसिरमा बिहानसम्म उम्मेदवारको तस्बिर, क्रम नम्बर र नामसहितको प्रकाशितप्रति प्रतिनिधिको हातहातमा पु¥याइसकिने आयोगको योजना छ । मतदान गर्न सजिलोका लागि प्रतिनिधिलाई प्रकाशितप्रति साथै लान छुट दिइएको छ ।
मतदान गर्ने तरिका
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सहज बनाएको छ । विद्युतीय मतदान मेसिनमा उम्मेदवारको विवरण हुन्छ । रोजेको विवरणको रातो स्वस्तिक चिह्नमा औंलाले थिच्नेबित्तिकै मतदान हुन्छ । भुलवश गलत ठाउँमा थिचिएको भए पुनः त्यहीँ स्वस्तिकमा थिचेर सच्याउन सकिन्छ ।
निर्वाचनका क्रममा तोकिएको संख्याभन्दा बढी मतदान गर्न मिल्दैन । कम संख्यामा भने मतदान गर्न पाइन्छ ।
बन्दसत्रका लागि अध्यक्ष मण्डल र माइन्युट कमिटी गठन
एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको बन्दसत्र सञ्चालनका लागि अध्यक्ष मण्डल र माइन्युट कमिटी गठन गरेको छ ।
११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहेका छन् ।
त्यस्तै, बैठकले सात सदस्यीय माइन्युट कमिटी गठन गरेको छ । सो कमिटीमा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, केन्द्रीय सदस्यहरू सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, मनोज थापा, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली र ज्वालाकुमारी साह रहेका छन् । बैठकले मनोनीत गरिने ५ प्रतिशत प्रतिनिधिको पनि टुंगो लगाएको एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनमा मंसिर १०, ११ र १२ गते चितवनमा हुँदै छ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानको व्यवस्थाअनुसार १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात जना सचिव गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । राजधानी राष्ट्रिय दैनिक
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जनगणना स्याटलाइटबाट गर्ने तयारी
दुबई जान त्रिभुवन विमानस्थल ​पुगेका सहकारीका ७६ सदस्यलाई मध्यराति रोकियो
अडिसनबाट छानिए ‘लाखे’ का लागि १० जना कलाकार
अख्तियारद्वारा एकै दिन ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
४ सय ८० करार प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने त्रिविको आत्मघाती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पाँच उपकुलपतिको आग्रह
मुम्बईमा थप दुई जनामा ओमिक्रोन संक्रमण, भारतमा संक्रमित संख्या २३ पुग्यो
कोल्हवी मिडिया एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि
सुचना विभाग दर्ता नं: २७४४/२०७८-०७९
कम्पनी दर्ता नं: २५९८२०/०७७/०७८
कार्यालय: कोल्हवी, बारा
विज्ञापनका लागि : ९८६३५५५३१०
डि. पि. घिमिरे
© 2021 .Kolhabinews.com. All Rights Reserved.